TSY MISY NY FEHEZAN-DALàNA MOMBA NY VKONTAKTE - VKONTAKTE - 2019
Mamaha olana amin'ny famandrihana code verification VKontakte
Yandex.Browser dia tsara satria manohana ny fanitarana mivantana avy any amin'ny torohay ho an'ny navigateur roa: Google Chrome sy Opera. Noho izany, ny mpampiasa dia afaka mahita foana izay ilainy. Na izany aza, tsy voatery manamboatra ny fananana rehetra foana ny fanitarana, ary indraindray mila mamafa izay tsy tianao hampiasaina ianao.
Esory ny fanitarana avy amin'ny Yandex Browser
Amin'ny ankapobeny, tena ilaina ny mitarika "fanitsiana" ary manadio ny tranokala amin'ny fanitarana tsy ilaina. Raha ny marina dia manomboka haingana kokoa ny asa, satria mihena ny enta-mavesatra ary tsy ilaina ny manara-maso ny asa fanitarana rehetra.
Ankoatr'izay, ny rindran-dàlana tsirairay dia mampandeha ny RAM amin'ny solosainao. Ary raha toa ny tompon'ny PC izay maoderina amin'ny RAM be dia be tsy manahy mikasika ny famenoana RAM, ny tompon'ireo mpampiasa na ny ordinatera matanjaka indrindra dia mety hahatsapa ny fihenana rehefa mihazakazaka ny browser.
Indraindray ny mpampiasa dia mametraka fanitarana mitovy amin'izany, ary mahazo fifandirana eo amin'ny asany. Ohatra, maro ireo adiresy fanampiny amin'ny VKontakte dia mety tsy mety tsara ny mifanaraka, ary ny iray amin'izy ireo dia voatery ho voafafa.
Raha fantatrao tsara fa tsy te hampiasa iray na maromaro ianao dia azonao atao ny mamafa azy ireo amin'ny fotoana rehetra. Ary azo atao amin'ny fomba roa izany.
Raha tsy manana fanitarana firy ianao, dia milamina tsara ao anaty baoritra, eo ankavanan'ny adiresy. Mifidiana ny fanitarana tsy ilainao intsony ary tsindrio ny havanana. Ao amin'ny sakafo misokatra, tsindrio ny "Fafao":
Ao amin'ny varavarankely pop up, dia manamafy ny fikasanao amin'ny tsindrio "indrayFafao".
Aorian'izany, ny fanitarana dia hesorina sy hanjavona amin'ny browser-nao, miaraka amin'ny bokotra ao amin'ny doka.
Ny fomba voalohany dia mety amin'ny fanesorana haingana ny iray amin'ny fanitarana, fa tsy ny universal foana. Ny baiko fanoratana dia ahitana bokotra fanitarana izay maneho toy ny fametahana fikandrana ao amin'ny Windows. Indraindray dia tsy misy bokotra ny fanitarana installée, ary indraindray ny mpampiasa dia manafina ilay bokotra, ka ny fanesorana dia tsy azo esorina afa-tsy amin'ny alalàn'ny navigateur.
Mba hanesorana ireo fanampim-panazavana ao amin'ny navigateur Yandex, tsindrio ny "sakafo"ary mifidiana"fanampin-tsakafo":
Ao amin'ny faran'ny pejy dia hahita sakana "Avy amin'ny loharano hafa"Ity ny fanitarana rehetra izay efa napetrakao. Mba hanesorana ny fanitarana tsy ilaina, dia manamboara fotsiny azy ireo sy ny"Fafao":
Tsindrio eo izany, ary amin'ny fanamafisana ny famafana, mifidiana "Fafao".
Azonao atao ny manala ireo fanitarana tsy ilaina rehetra avy amin'ny navigateur anao.
Ampidirina ao amin'ny Yandex Browser
Araka ny efa fantatrao, ny Yandex Browser dia manana ny katalaogy manokana momba ny fanatsarana azy. Matetika izy ireo no tsy tafiditra ao anaty tranokala, ary raha toa ka ataonao voalohany izy ireo dia apetraka ao amin'ny solosaina. Mampalahelo fa tsy azo esorina ny fanitarana toy izany. Azonao atao ny manafoana azy ireo toy ny tsy ilaina.
Jereo koa: Fitaovana ao amin'ny Yandex Browser: fametrahana sy fametrahana
Amin'ny fomba tsotra, afaka manadio ny Yandex Browser ianao amin'ny fanitarana tsy ilaina ary hampihenana ny habetsan'ny rindrambaiko PC izay mandany azy.